Eli khaya lihonjisiweyo leeholide ezine likhululekile kwaye lixhotyiswe kakuhle, linamagumbi okulala amane kunye nendawo yokuhlala ebanzi kakhulu.
Ime kwisiza esinye ne-FNR024, FNR025, FNR026 kunye ne-FNR034, eqinisekisa ukuba lukhetho oluhle kwiintsapho okanye izihlobo ezinqwenela ukuya eholideyini kunye. Lilonke, izindlu zeeholide zibonelela ngeebhedi ezingama-24.
Kufuphi, uya kufumana iSaint-Quentin (iikhilomitha ezingama-20), iMyuziyam yeMfazwe yeHlabathi yokuQala ePeronne okanye eParis, emi ngaphakathi kweyure ezimbini zokuhamba.
Nceda uqaphele, ipropathi ifanelekile kwizibini ezinokunciphisa ukuhamba.
Eli khaya lihonjisiweyo leeholide ezine likhululekile kwaye lixhotyiswe kakuhle, linamagumbi okulala amane kunye nendawo yokuhlala ebanzi kakhulu. Ime kwisiza esinye ne-FNR024, FNR025, FNR026 kunye ne-FNR034, eqinisekisa ukuba lukhetho oluhle kwiintsapho okanye izihlobo ezinqwenela ukuya eholideyini kunye. Lilonke, izindlu zeeholide zibonelela ngeebhedi ezingama-24. Kufuphi, uya kufumana iSaint-Quentin (iikhilomitha ezingama-20), iMyuziyam yeMfazwe yeHlabathi yokuQala ePeronne okanye eParis, emi ngaphakathi kweyure ezimbini zokuhamba. Nceda uqaphele, ipropathi ifanelekile kwizibini ezinokunciphisa ukuhamba.
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 5 m / ithuba lokuloba 12 km / ukuthenga 3.5 km / Amanye amanzi okanye indawo yokuqubha.(Ichibi) 20 km / indawo yokutyela 3.5 km / idolophu ekufutshane(Cambrai) 36 km / amanzi(Umlambo) 12 km
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Roisel